Uthini uMgaqo wabasebenzi kwaye kutheni ubaluleke kangaka | Ezezimali
Uthini uMgaqo wabasebenzi
Zonke iimeko zokusebenza, nokuba kungaphuculwa ntoni kweziVumelwano eziHlangeneyo, kungenxa yoMthetho wabaSebenzi, umgaqo oseka iziseko zomsebenzi, ngokomvuzo, iiyure zomsebenzi, ikhefu lokungabikho emsebenzini, ukukhubazeka ... Kodwa , Uthini umthetho wabasebenzi? Kutheni le nto ibaluleke kangaka?
Ukuba uvile ngayo kodwa awuqinisekanga ukuba kutheni ibaluleke kangaka kwaye ingakuchaphazela njani emsebenzini wakho, lixesha lokuba wazi esona sixhobo sinamandla kubasebenzi.
1 Uthini uMgaqo wabasebenzi
2 Yintoni elawula umthetho wabasebenzi
3 Ingxelo yabasebenzi vs isiVumelwano esiHlangeneyo
4 Kwenzeka ntoni ukuba ngokwesivumelwano okanye ngesiVumelwano esiHlangeneyo kufuneka into ethile kum engavumelekanga kuMmiselo wabasebenzi
5 Zeziphi ezona ndawo zibalulekileyo
Umthetho wabasebenzi, okwabizwa ngegama lawo, ET, iyikhowudi, a umthetho, osebenza kubo bonke abasebenzi abaqeshiweyo. Oko kukuthi, kuye nakowuphi na umsebenzi onesivumelwano sengqesho nenkampani okanye nomnye umntu. Lijongene nokulawula ubudlelwane bezengqesho ezi arhente zimbini zinazo, kwelinye icala umqeshwa, kwelinye icala umqeshi.
Oko yazalwa ngo-1980, ibikhona kwaye ingowona mgaqo ubalulekileyo kubudlelwane babasebenzi. Ngoku, kuseka ubuncinci, oko kukuthi, ngesiVumelwano esiHlangeneyo, ngesivumelwano, njl. into ethethwa nguMthetho wabaSebenzi inokuphuculwa.
Umzekelo, khawufane ucinge ukuba umthetho wabasebenzi ukukunika iintsuku ezi-5 zokubhubha komntu. Kwelinye icala, kwinkampani yakho, ngesiVumelwano, iintsuku ezihambelana nawe zi-7.Akukho kuphikisana, kodwa into ethethwa yi-ET kukuba ubuncinci beentsuku ezintlanu ziintlanu, kodwa kwicala lenkampani ngaphezulu.
Njengomgaqo jikelele ulawulo lweemeko zokusebenza luya kuhlala lukho njalo: Okokuqala, yintoni esekwe kwisivumelwano sengqesho; emva koko kuthiwe kwisiVumelwano esiDibeneyo. Kwaye, okokugqibela, uthini uMgaqo wabaSebenzi.
Oku akuthethi ukuba ngesivumelwano sengqesho iimeko ezimbi ngakumbi zinokwamkelwa; Ubuncinci be-ET kufuneka buhlale buqinisekisiwe kuba ukuba akunjalo, kunokwenzeka ukuba unike ingxelo.
Kule minyaka idlulileyo, i-Workers 'Statute iye yenziwa uhlengahlengiso, olungcono kunye nolubi, ngokubhekisele kubasebenzi abaqeshiweyo. Olunye lolona qhankqalazo, kwaye ekufuneka uluthathile ingqalelo, kukuba, nangona abantu abaziqeshileyo okanye abaziqeshileyo bengafakwanga, kwagqitywa kwelokuba abo baxhomekeke ngokwabo kwezoqoqosho baya kukhuselwa phantsi kwalo mgaqo okokoko iimfuno ezithile zidibene.
Yintoni elawula umthetho wabasebenzi
Ngoku ukuba uyazi ukuba yintoni iNgxelo yaBasebenzi, ngokuqinisekileyo uya kubuza ukuba ngowuphi umxholo. Kwaye kukuba, ngokubanzi, iseka iziseko ngokubhekisele emsebenzini (umzekelo, utsho ukuba ungakanani ubudala apho ungasebenza khona), kunye nosuku lokusebenza, amaxesha olingo, umvuzo, ukugxothwa, iindlela zekhontrakthi, Ikhefu yokungabikho, ukungakwazi ukusebenza, ukusebenza ebusuku, ixesha elongezelelekileyo ...
Ngamanye amagama, une Umgaqo osemthethweni apho isikhokelo esincinci sobudlelwane bengqesho sinikwa kuzo zonke iinkalo ezinokukuchaphazela.
Ngesi sizathu, iNgxelo yoMsebenzi yahlulwe yangamacandelo amathathu:
Kubudlelwane bomntu ngamnye.
Amalungelo okumelwa ngokuhlangeneyo kunye nokudityaniswa kwabasebenzi kwinkampani.
Kuthethathethwano ngokudibeneyo kunye neziVumelwano eziHlangeneyo.
Ezi zihloko zintathu ziphambili zahlulwe zazahlulo, amacandelo kunye namanqaku, ukuya kuthi ga kuma-92 ewonke.
Ingxelo yabasebenzi vs isiVumelwano esiHlangeneyo
Njengoko besesitshilo ngaphambili, uMthetho wabaSebenzi ubeka ubuncinci beemeko zobudlelwane kwezengqesho kodwa ezi zinokuphuculwa sisivumelwano sengqesho okanye ngesivumelwano esidibeneyo. Ngaba oku kuthetha ukuba iNdibano ingcono?
Isivumelwano esidityanelweyo ngummiselo ophuma ngenxa yothethathethwano phakathi kwabameli babasebenzi kunye nenkampani uqobo. Ngamanye amaxesha ayichaphazeli inkampani kuphela, kodwa necandelo (umzekelo, icandelo lezentsimbi, icandelo lezobisi ...). Banobude bexesha elithile kwaye bamisela iimeko zokusebenza, kunye namalungelo noxanduva lweqela ngalinye. (abasebenzi kunye nenkampani). Ewe kunjalo, kufuneka ithobele eyona miqathango iphantsi ekwiMithetho yabasebenzi.
Singathi isiVumelwano esiHlangeneyo sisivumelwano sengqesho esibanzi, apho kujongwana nemiba enjengeeholide, iimvume, iiyure zomsebenzi, imivuzo, njl.
Kwenzeka ntoni ukuba ngokwesivumelwano okanye ngesiVumelwano esiHlangeneyo kufuneka into ethile kum engavumelekanga kuMmiselo wabasebenzi
Akumangalisi kangako ukufumana iimeko apho, ngesivumelwano sengqesho, isiVumelwano esiHlangeneyo, okanye yonke imihla, iinkampani okanye abaqeshi bafuna iimeko kubasebenzi babo ezichasene noMthetho waBasebenzi (umzekelo, ukufaka iiyure ezininzi, hayi ukuba neeholide okanye ukungahlawulwa, njl.).
Xa oku kusenzeka, umgaqo osetyenziswayo yiNgxelo yabasebenzi. Ngamanye amagama, ukuba kukho into ekwiSivumelwano soThethathethwano oluHlanganelweyo okanye kwisivumelwano esichasene noko kubekwe yi-ET, eli gatya liyacinywa ngokuzenzekelayo, kuba imiqathango yemigaqo kufuneka ihlonitshwe.
Nangona kunjalo, inyani isenokwahluka, kuba uninzi lunokuyamkela le miqathango ukuze luqhubeke lusebenza.
Zeziphi ezona ndawo zibalulekileyo
Kuwo onke amanqaku angama-92 enza i-ET, kuya kufuneka wazi ukuba kukho ezinye iindawo ezibaluleke ngakumbi, mhlawumbi kungenxa yokuba kuboniswane nazo ngakumbi okanye kuba zichaphazela imiba ebalulekileyo yobudlelwane bengqesho.
Ngale ndlela, zezi:
Usuku lokusebenza kunye nekhefu. NgokwesiXokelelwano saBasebenzi, kukho usuku oluphezulu lokusebenza lweeyure ezingama-40 ngeveki, nangona ngesiVumelwano banokuba ngaphantsi. Ngokuphathelele kwikhefu, kukho imfuneko yokuba kubekho iiyure ezili-12 zokuphumla. Kwaye, ukuba usuku lungaphezulu kweeyure ezintandathu, kuyakubakho ikhefu lemizuzu eli-15.
Amalungelo abasebenzi. Malunga nokunyuselwa ngaphakathi, ukungacalulwa, ukuthembeka emzimbeni, isidima, uqeqesho emsebenzini ...
Izenzo ezingavumelekanga. Njengokusebenzela abantwana abangaphantsi kwe-16 (ngaphandle) okanye ukwenza ixesha elongezelelekileyo okanye umsebenzi wasebusuku wabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala.
Njengoko ubona, isiqhelo esisisiseko somThetho wabaSebenzi uvumela ukulawula ubudlelwane obulinganayo babasebenzi kubasebenzi nabaqeshi. Ngaba wakha waba neengxaki ezinje? Sazise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Uthini uMgaqo wabasebenzi
Uyityala phi imali yam?
Iingcaphuno zikaMilton Friedman